Stock Car Racing 3.1.15 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.1.15 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Stock Car Racing
Stock Car Racing ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Drivers start your engines! Professional oval track racing that explodes with racing action!
Experience the adrenaline as you steer over 600 horsepower around the track. Choose your stock car and race on5different speedways including the 1 Mile, 2.5mi Quad-Oval,a1.5mi Tri-Oval and the Showgrounds Paperclip!
Multiplayer - Race head to head against other players
Regulation - Race and set the difficulty for higher prizes
Ladder - Race against progressively faster opponents for increasing prizes.
Endurance - Race the full 400 lap distance.
Hot Lap - Set your fastest single lap on Game Center
Practice - Practice racing lines and setup car for race trim
Includes cars from the golden-era right up to the modern-era. Drive Super Trucks or 1970s classics. Sprint cars and dirt track racing coming soon!
Feel your machine on the absolute limit of adhesion. Earn in-game cash to buy, upgrade, repair and adjust your Stock Car. Qualify to unlock new tracks for increasing prize money.
Beat your friends and join the privileged few to make it onto the leaderboards.
4 unique tracks to unlock.
Persistent car-damage with sparks, smoke and flames for realistic racing.
Design your Stock Car with team colours and racing numbers in the Paintshop.
Engine, tires and chassis increasing your car's overall performance.
Allows you to adjust your car for race trim.
drivers သင့်ရဲ့အင်ဂျင် start! ပြိုင်ကား action ကိုအတူပေါကျကှဲကြောင်း Professional ကဘဲဥပုံလမ်းကြောင်းပြိုင်ကား!
သင်လမ်းကြောင်းတစ်ဝှမ်း 600 မြင်းကောင်ရေအားကျော်ခုတ်မောင်းအဖြစ် adrenaline ခံစားရသည်။ သင့်ရဲ့စတော့ရှယ်ယာကားတစ်စီးနှင့်ပြိုင်ပွဲ 1 ရတနာမိုင်အပါအဝင်5ကွဲပြားခြားနားသောမောင်းပြိုင်ပွဲ, 2.5mi ကို Quad-ဘဲဥပုံ, တစ်ဦး 1.5mi Tri-ဘဲဥပုံနှင့် Showgrounds Paperclip အပေါ် Choose!
multiplayer - အခြားကစားသမားဆန့်ကျင်ခေါင်းကိုလူမျိုးခေါင်းကို
စည်းမျဉ်းဥပဒေ - လူမျိုးနှင့်အဆင့်မြင့်ဆုများအတွက်အခက်အခဲသတ်မှတ်ထား
လှေကား - တိုးမြှင့်ဆုများအတွက်တဖြည်းဖြည်းပိုမြန်ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်လူမျိုး။
သည်းခံခြင်း - အပြည့်အဝ 400 ပေါင်အကွာအဝေး Race ။
ပူပြင်းတဲ့ရင်ခွင် - ဂိမ်းစင်တာတွင်ပေါ်တွင်သင်၏အမြန်ဆုံးတစ်ခုတည်းရင်ခွင် Set
အလေ့အကျင့် - အလေ့အကျင့်မျိုးနွယ်တိများအတွက်လိုင်းများနှင့် setup ကိုကားတစ်စီးပြိုင်ကား
ညာဘက်ခေတ်သစ်ခေတ်အထိရွှေခေတ်ကနေကားများပါဝင်သည်။ စူပါကုန်ကားသို့မဟုတ် 1970 ဂန္မောင်း။ Sprint ကားများနှင့်မကြာမီလာမယ့်ဖုန်လမ်းကြောင်းပြိုင်ကား!
ကော်၏အကြွင်းမဲ့အာဏာန့်သတ်ချက်ပေါ်တွင်သင်၏စက်ခံစားရတယ်။ ဝယ် upgrade, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်သင့်စတော့အိတ်ကားကိုထိန်းညှိဖို့အတွက်ဂိမ်းငွေဝင်ငွေ။ ဆုချီးမြှင့်ငွေကိုတိုးမြှင့်အသစ်အပုဒ်သော့ဖွင့်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီ။
အွန်လိုင်း multiplayer Race
သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကို Beat နှင့်ဦးဆောင်ပေါ်သို့ကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်ထူးခံအနည်းငယ် join ။
သော့ဖွင့်ဖို့4ထူးခြားတဲ့အပုဒ်။
မီးစများ၌၎င်း, မီးခိုးများနှင့်လက်တွေ့ပြိုင်ကားများအတွက်မီးတောက်များနဲ့အတူ persistent ကားတစ်စီး-ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။
သင့် STOCKCAR customize
အဆိုပါ Paintshop အတွက်အသင်းကိုအရောင်အဆင်းနဲ့ပြိုင်ကားနံပါတ်များနှင့်သင်၏စတော့အိတ်ကားဒီဇိုင်းရေးဆွဲပါ။
သင့် STOCKCAR upgrade
Setup သင့် STOCK CAR
အမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D ဂရပ်ဖစ်များနှင့်လက်တွေ့ရူပဗေဒ။
drivers သင့်ရဲ့အင်ဂျင် start!
Stock Car Racing အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Stock Car Racing အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Stock Car Racing အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Stock Car Racing အား အခ်က္ျပပါ
everything69 စတိုး 353 264.84k
Stock Car Racing ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ၿပိဳင္ပြဲ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Stock Car Racing အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.1.15
ထုတ်လုပ်သူ Minicades Mobile
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.minicadesmobile.com/privacypolicy/
App Name: Stock Car Racing
File Size: 90.65MB
Release date: 2019-01-11 00:29:46
လက်မှတ် SHA1: 85:52:F2:9B:D0:2D:46:42:8C:25:B8:84:E2:C9:99:DA:61:17:D1:F5
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Evan Lancaster
အဖွဲ့အစည်း (O): Minicades Mobile Pty Ltd
နယ်မြေ (L): Melbourne
နိုင်ငံ (C): AU
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Victoria
Stock Car Racing APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ